DHAGEYSO+SAWIRO:- Wafdi uu horkacaayo madaxweyne Farmaajo oo maanta u dhoofay Turkiga – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DHAGEYSO+SAWIRO:- Wafdi uu horkacaayo madaxweyne Farmaajo oo maanta u dhoofay Turkiga
Wafdi uu horkacaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyagoona kusii jeeda dalka Turkiga.
Xildhibaano, wasiiro, saraakiil ciidan iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wafdiga madaxweyne Farmaajo kusii sagootiyay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo ka mid ahaa mas’uuliyiintii safarka ku wehlinaysay madaxweyne Farmaajo oo si kooban warbaahinta ula hadlay ayaa sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal iyo iskaashiga.
Safarka madaxweyne Farmaajo ee dalka Turkiga ayaa noqonaya kiisii 5-aad ee uu uga baxo dalka dibadiisa, tan iyo markii xilka loo doortay 8-da bisha Febraayo ee 2017-ka.
Ugu dambeyn, madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa dalka Turkiga kusii sugnaan doonno muddo seddax maalmood ah, waxayna dalka dib ugu soo laaban doonaan kadib markii ay kulamadoodii soo gaba-gabeeyaan.